Nhau - Kushandiswa kwe3-axis kudzikamisa drone gimbal kamera
Kushanda kwe3-axis kudzikamisa gimbal kamera muUAV mugwagwa mukuru kuongorora
Pachivanhu, kuongorora mugwagwa mukuru kunoenderana neIPC, ITC, Dome nemimwe michina kuti uwane chaiyo-nguva yekutarisa mota. Mhinduro idzi dzave dzichishandiswa kwemakore mazhinji uye dzakakura zvakanyanya. Nekudaro, pamwe nekuvandudzwa kwerutsva rutsva rwemigwagwa yemigwagwa mikuru yekuvaka, zvikanganiso zvinoratidzwa zvishoma nezvishoma: chiyero chekutarisa chichine nzvimbo dzisingaoni, uye IPC / ITC inogona chete kugadzirisa yakagadziriswa. Dome / PTZ ine zvirinani kuchinjika, asi kunyatso kuendesa kuzadzikisa zvinodikanwa zveiyo isina nzvimbo yebofu inowedzera mari yeprojekiti
Unmanned yemuchadenga mota (UAV) yakanaka yekuwedzera mhinduro yemugwagwa mukuru wekutenderera. UAV iri kuve mubatsiri akanaka wemapurisa emigwagwa mikuru. Muchina, UAV patrolmen vatumirwa kuti vaite maratidziro emigwagwa, manejimendi ekutyorwa kwemigwagwa, kurasikirwa kwenzvimbo dzenjodzi.
Kambani yedu yeUAV kamera ine 3-axis gimbal stabilizer ine zvinotevera zvinotevera.
1. Seamless docking neatove masisitimu, tsigira ONVIF kuwana, Ultra-refu daro, chaiyo-nguva vhidhiyo kufambisa kudzokera kuimba yekuraira.
2. 30X / 35X Optical zoom, kukwirira-kwakakwirira kutora mota dzisiri pamutemo, kujekesa pachena rezinesi remotokari. Kumanikidza kunoguma nekurasikirwa nedudziro. Bata vatengi vemufananidzo wekutanga.
3. Batsira pakubata nekusangana mumigwagwa uye tsaona dzemumigwagwa.
4.Emergency lane yekutarisa.
5. Kuchenjera kwekutevera.
6. Nyeredzi-nhanho yakadzika-kuvhenekera inoonekwa zoom kamera ine yekupisa yekufungidzira kamera kuti uwane masikati neusiku kuongorora.
7. Kutumirwa kuri nyore, mhinduro nekukurumidza.